Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius kubadda cagta oo sida ugu fiican loo yaqaan "Bernat". Dabeecadeena Hore ee Juan Bernat iyo Xaqiiqooyinka Aan Biyeyn Karin waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo ka socda wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxaa ku jira asalkiisa qoyskiisa, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay xawaarekiisa gaarka ah, dariiqa iyo xirfadaha gudbinta. Si kastaba ha noqotee, dhowr qof oo keliya ayaa tixgelinaya taariikhda Juan Bernat ee ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Hore iyo Taariikhda Qoyska
Juan Bernat wuxuu ku dhashay maalinta 1sta March ee 1993 ee Cullera ee Spain. Wuxuu ku dhashay hooyadiis Amparo Bernat iyo aabbihiis Alejandro Bernat.
Dadka reer Isbaanish ah ee qowmiyadaha cadaanka ahi maaha adduunka kaliya. Waxa uu ahaa mid ay u weheliyaan walaashii twin oo uu jecel yahay, Ines oo uu sannado ka dib ku jiri lahaa, wuxuu qeexayaa inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee uu la kulmay dhalashada ka hor.
Juan Bernat Oo Loo Sameeyay Rabshadiisii ​​Labaad. Heerarka: Jbernat.
Wiilka Bernat wuxuu ku dhashay cusbitaalka Cullera halkaas oo uu ku soo koray walaalka walaalkiis ah ee Alejandro Jr iyo walaashii Ines. Horumarinta Bulshada Valencian ee Cullera, Bernat iyo walaalkiis ka weyn ayaa ah kubiirayaal kubada cagta ah oo jecel isboortiga laga bilaabo da 'aad u jilicsan, waxaana laga yaabaa inay waqti ku qaadato Valencia garoonkeeda garoonka tababarka oo sidoo kale loo yaqaano City City of Paterna.
Joogitaankii hore ee goobta tababarka looma dhicin baahida loo qabo madadaalo aan rasmi ahayn, laakiin waa qeyb ka mid ah nidaamka isboortiga dhalinyarada ee abaabulan kadib markii waalidiintooda ay ku qoreen Valencia Cf markii Bernat uu ahaa kaliya 6 sano jir ah.
Markii ugu horeysay, ciyaartoyda kubadda cagta ma ahan mid riyadiisa ah in uu noqdo xirfadle, lakiin wakhti xaadirka ah ayuu sii watay, waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qeylka badnaa, waxaana badanaaba muuqata inuu yahay mid ka mid ah dadka waaweyn ee ka shaqeynayay meel ka baxsan garoonka tababarka.
Juan Bernat (bidix) ee nidaamka dhalinyarada ee Valencia CF oo ay weheliyaan saaxiibka carruurnimada ah ee Robert Ibanez. Heerarka: Instagram.
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Dhismaha Xirfadaha
Valencia CF ayaa noqotay kooxdii kaliya ee Bernat ku lahayd kubada cagta oo dhan. Wuxuu si xariif ah ugu soo baxaa safarada iyo xilligii uu jirey 18 (2011), wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay u saftay kooxda koowaad.
Juan Bernat oo uu ugu sareeyo xirfadiisa ciyaareed ee Valencia CF. Heerarka: FM Base.
Intaas ka hor, Bernat waxa uu si fiican u soo baxay isagoo ah Isboorti Isbaanish ah. Wuxuu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay kooxda 16s ee xulka qaranka ee 2009 iyo sanad kadib, wuxuu gaaray final-ka 2010 UEFA European Championship isagoo ka hoos ciyaaraya kooxda 17.
Dareenka saxaafadeed ee aan la iska indha tirnayn ayaa si joogta ah u noqday jadwalka cayaarta iyo cabsida leh oo hal mar ah, oo shaaca ka qaaday ereyada taageeraya waalidkiisa saxaafada Isbaanishka, isagoo leh:
"Waxay ii sheegaan in ay had iyo jeer is-hoosaysiiyaan, cagahayga dhulka ku hay, iyo sidoo kale si adag u shaqeeyaan."
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Kacsanow inaad ku guulaysato
Bernat ayaa la joogay Valencia ilaa sannadka 2014 markii uu ku biiray FC Bayern Munich. Inkastoo kooxda Jarmalka, Bernat lagu qiimeeyay qaab ciyaareedkiisa uu ku yimid tababaraha, Pep Guardiola oo ah ikhtiyaari ah fursado la isku dari karo.
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa u qalmay inuu sii joogo booskiisa daafaca bidix ilaa iyo bishii April ee 2018 markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed liita oo ku dhow inuu Bayern Munich ka reebo Champions League intii ay socotay kulankii 2-1 ee Sevilla. Madaxwaynaha Bayern Munich, Uli Hoeness ayaa maskaxda ku hayaa inuu iibiyo Bernat isagoo sharaxaya in daafaca bidix uu cadeeyay inuu shil gaari doono xilli ciyaareedka sabtida.
"Markii aan ku ciyaarnay Seville, waxa uu ahaa mas'uuliyad na saarnaa inaan ku dhoweyno in la tirtiro ... waxaan go'aansaday inaan iibino isaga sababtoo ah wuxuu ku dhawaad ​​nagu soo iibsadaa dhamaan guulaha Champions League."
Waxa ay aheyd mid isbuucyo ah ka hor inta uusan Bernat la iibin kooxda PSG oo ku iibsatay € 15 (£ 13m / $ 17m). Bernat ayaa ku biiray kooxda on 31st ee August 2018 qandaraas seddex sanno ah, tan iyo markii uu ku adkeystay inuu qadarin doono qandaraaska uu kula joogo kooxda.
Juan Bernat oo PSG ku biiray 31 August 2018. Lacagaha: PSG.
Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Bernat weli ma guursan oo wuxuu leeyahay hal rikoodh oo taariikhda taariikhda shukaansiga ah oo la saaxiib ah oo hore saaxiibtiis u yaqaan Eva Pedros. Wax yar ayaa la ogyahay sida ay udubdhexaadintu u kulmeen. Waxay, si kastaba ha ahaatee, waxay kala sooceen 2016, horumar ah taasoo ka dhigeysa xaaladda xiriirka haatan ee Bernat sida hal.
Juan Bernat iyo saaxiibkiisii ​​hore ee Eva Pedros ayaa kala soocay 2016. Heerarka: Isbaanishyada Isbaanishka.
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
Bernat sida ciyaartoyda ugu guulaha badan kubada cagta ayaa leh qibrad aad u fiican iyo cayaar isboorti oo jecel kubada cagta. Qoyska oo markii ugu horeysay ku dhuftay miisaankiisa intii uu joogay sanadihii 15 ee Valencia, ayaa u safray si uu u taageerayo maalinta uu ku soo bandhigay FC Bayern. Weli way sii wadi doonaan taageerada isaga oo ah inuu si run ah u shaqeynayo PSG, koox uu ka mid yahay kaliya aan ka yareyn bilihii 5 (ilaa iyo haatan).
Hooyo Juan Bernat ayaa joogay intii uu ku sugnaa Bayern Munich ee 2014. laga soo bilaabo Left-Right: Walaalka Bernat walaalkiis - Alejandro Jr, oo laba mataano ah - Ines, Bernat isaga, hooyadii - Amparo Bernat iyo aabbe Alejandro Bernat. Heerarka: Tz
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Xaqiiqooyinka Xirfadaha Joogtada ah
Bernat ayaa muddo dheer ku raaxeysanayay taageerayaal badan oo tababar ah Pep Guardiola. Nasiib darro, Guardiola ayaa Bayern kaga tagay Manchester City ee 2016 ka hor inta uusan Bernat ku guuleysan karin inuu hoos u dhaco.
Juan Bernat waa taageere weyn oo Pep Guardiola ah. Heerka: Abendzeitung München.
Claudio Pizarro, Javi Martínez iyo Thiago Alcantara wuxuu Bernat ka caawiyay geeddi-socodka isdhexgalka intii uu joogay Bayern.
Tababaraha reer Spain ayaa ku biiray farsamooyinka la midka ah ee uu la leeyahay saaxiibkiisa, Jordi Alba waxaana inta badan loo yaqaan "Clone of Jordi Alba". Bernat ma dhicin isbarbardhigga sida uu mar hore u sheegay:
"Waxaan heysanay awoodo isku mid ah oo aan isbarbardhigeyno ayaa iga dhigaya inaan dareemo waxoogaa ixtiraam leh."
Juan Bernat ayaa la wadaagaya qaab ciyaareed la mid ah ciyaartoydiisa, Jordi Alba. Lacagaha: Plaza Deportiva.
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -nololeedka
Bernat waxa uu ku nool yahay qaab nololeed oo ka baxsan garoonka ciyaarta taasoo ka dhigeysa inuu ka soo baxo kubada cagta. Mar kasta oo kubada cagta ayan waqti fiican ku helin asxaabta iyo kuwa aad jeceshahay waxaa si sahlan loo saadaalin karaa in lagu ciyaaro Gym ama waqtiga tayada kharashka lagu bixinayo xeebta quruxda badan.
Bernat wuxuu jecel yahay xeebaha iyo horumarinta mashiinka jimicsiga. Heerarka: Instagram.
Nasasho badan ayaa ah hawlaha uu ku shaqeynayo markasta oo uu ku laabto guriga. Waxay ku jiraan ciyaaraha fiidiyowga iyo daawashada taxanaha (haa, wuxuu sidoo kale raacay Game of Thrones).
Nashaadyada dhaqdhaqaaqa ee Bernat ee ka mid ah waxaa ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga iyo daawashada tv-ka. Heerarka: Instagram.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Hore ee Juan Bernat iyo xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Hector Bellerin Story Story Plus Xogta Warka Xogta Leh
Ander Herrera Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Xavi Hernandez Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Kepta Storyhood Story Plus Xogta Warka Xogta Leh